China Thin Polyimide azo fehezina FPC miaraka amin'ireo mpanamboatra FR4 mihenjana sy mpamatsy | Kangna
FPC mora azo aidina Polyimide azo fehezina miaraka amin'ny FR4 manamafy
Isa isa: 2
Min ny sakany / habaka: 4 mil
Min kely habe: 0.20mm
Ny hatevin'ny birao vita: 0.30mm
Loko sarontava: mena
Fotoana fitarihana: 10 andro
1.Inona izany FPC?
FPC no fanafohezana ny faribolana vita pirinty malefaka. ny hazavany, ny hateviny manify, ny miondrika maimaimpoana ary ny mivalona ary ny toetra tsara hafa dia tsara.
FPC dia novolavolain'i Etazonia nandritra ny fizotran'ny teknolojia rocket habakabaka.
Ny FPC dia misy sarimihetsika polymer manify miaro ny endriny mifangaro mifatotra amin'izany ary matetika omena fonosana polymer manify hiarovana ny boriborintany. Ny teknolojia dia nampiasaina tamin'ny fampifandraisana fitaovana elektronika hatramin'ny taona 1950 tamin'ny endrika iray na hafa. Izy io dia iray amin'ireo teknolojia fifandraisana manan-danja indrindra ampiasaina amin'ny famokarana vokatra elektronika mandroso indrindra ankehitriny.
Ny tombony amin'ny FPC:
1. Afaka miondrika, mandratra ary mivalona malalaka, voalamina mifanaraka amin'ny fepetra takian'ny spatial layout, ary mihetsika sy manitatra arbitrarily amin'ny habe telo-habe, mba hahatratrarana ny fampifangaroana ny fivorian'ny singa sy ny fifandraisana tariby;
2. Ny fampiasana FPC dia afaka mampihena be ny habetsaky ny lanjan'ny vokatra elektronika, mifanaraka amin'ny fivoaran'ny vokatra elektronika mankany amin'ny avo lenta, miniaturization, fahamendrehana avo lenta.
Ny birao fizaran-tany FPC dia manana tombony ihany koa amin'ny fanaparitahana ny hafanana tsara sy ny fahamendrehana, ny fametrahana mora ary ny vidiny feno feno. Ny fitambaran'ny famolavolana birao miovaova sy henjana koa dia manamboatra ny tsy fahampiana kely amin'ny substrate malefaka amin'ny fahaiza-mitondra ny singa amin'ny lafiny sasany.
Ny FPC dia hanohy hanavao hatrany amin'ny lafiny efatra amin'ny ho avy, indrindra amin'ny:
1. Hatevina. Ny FPC dia tokony ho malefaka kokoa sy mahia;
2. Fanoherana fanoherana. Ny miondrika dia singa voajanahary amin'ny FPC. Amin'ny ho avy, ny FPC dia tokony ho malefaka kokoa, mihoatra ny 10.000 heny. Mazava ho azy fa mila substrate tsara kokoa ity.
3. Vidiny. Amin'izao fotoana izao, ny vidin'ny FPC dia ambony lavitra noho ny an'ny PCB. Raha midina ny vidin'ny FPC dia ho lehibe kokoa ny tsena.
4. Haavo teknolojia. Mba hahatratrarana ny takiana isan-karazany dia tsy maintsy havaozina ny fizotry ny FPC ary ny aperture farafahakeliny sy ny sakan'ny tsipika / elanelana dia tsy maintsy mahafeno ny fepetra takiana amboniny.
Previous: 8.0W / mk fitarihana hafanana ambony MCPCB ho an'ny fanilo elektrika
Manaraka: 6 layer impedance fanaraha-maso tabilao mihetsiketsika amin'ny flexener